သင်တန်းနှင့်နေထိုင်ရန်အခကြေးငွေများ - အလယ်ပိုင်းဘာသာစကားများကျောင်း, ကိန်းဘရစ်
အထူးကမ်းလှမ်းချက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီပြုလုပ်ထားသောကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ကျူရှင်ခအားလုံးကို ၂၀% လျှော့ပေးသည်
intensive အင်္ဂလိပ် တစ်ပတ်ကိုပေါင် 260 ၂၀% လျှော့စျေး = တစ်ပတ်လျှင် GBP 20 21 နာရီတစ်ပတ်ကိုကျူရှင်ပေါင်းအချို့သောလူမှုရေး / ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများ။ စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုပါဝင်သည်။
အထွေထွေအင်္ဂလိပ် တစ်ပတ်ကိုပေါင် 205 ၂၀% လျှော့စျေး = တစ်ပတ်လျှင် GBP 20 တစ်ပတ်ကို 15 နာရီကျူရှင်ပေါင်းလူမှုရေး / ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများ 4-5 နေ့လည်ခင်း။
နေ့လည်ခင်းသင်တန်း တစ်ပတ်ကိုပေါင် 80 ၂၀% လျှော့စျေး = တစ်ပတ်လျှင် GBP 20 အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့နေ့လည်ခင်းအပေါ်တစ်ပတ်ကို6နာရီကျူရှင်။ စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုပါဝင်သည်။
4-9 ရက်သတ္တပတ် 5% လျှော့စျေး
10-15 ရက်သတ္တပတ် 10% လျှော့စျေး
16-23 ရက်သတ္တပတ် 15% လျှော့စျေး
24 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 20% လျှော့စျေး
တစ် ဦး မှတစ် ဦး သင်ခန်းစာများ - တစ်နာရီလျှင် ၅၅ GBP - လျှော့စျေးညှိနှိုင်းမှု
2020 / 2021 နေရာထိုင်ခင်းစျေးနှုန်းများ -
ဝက်ဘုတ်အဖွဲ့ homestay တစ်ပတ်ကိုပေါင် 170
အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ homestay တစ်ပတ်ကိုပေါင် 140
ကိုယ်ပိုင်ဖြည့်တင်း homestay တစ်ပတ်ကိုပေါင် 130
၂၀၂၁ မတ် ၁ ရက်တွင်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်နေရာထိုင်ခင်းကြိုတင်မှာကြားခကိုကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ
entry အခကြေးငွေအဆိုပါကျူရှင်စရိတ်တွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။ သင့်အနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ2လအတွင်း ပတ်သက်. ကင်းဘရစ်စာမေးပွဲစာအုပ်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပေ တစ်နှစ်လျှင်6ကြိမ် GBP 95
FCE တစ်နှစ်လျှင်6ကြိမ် GBP 151
CAE တစ်နှစ်လျှင်9ကြိမ် GBP 157
CPE တစ်နှစ်လျှင်4ကြိမ် GBP 164
IELTS ဖြေ မကြာခဏ GBP 185
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.cambridgeopencentre.org နှင့် https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သင်တန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုပါကဆေးကုသမှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အခကြေးငွေများဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်အာမခံပေးရန်စီစဉ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
သင်သည်သင်၏ကျောင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တည်းခိုနေထိုင်မှုအခကြေးငွေများအတွက်ငွေပေးချေပြီးနောက်သင်တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းများ၊ စိတ်ကြိုက်လေ့လာရေးခရီးများ၊ နေ့လည်ခင်းလှုပ်ရှားမှုအချို့၊ ကင်းဘရစ်ရှိလေဆိပ်၊ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်စက်ဘီးငှားရမ်းခများအတွက်ကုန်ကျရန်လိုအပ်သည်။ သင်တန်းကာလအတွင်းကျောင်းစာအုပ်များကိုသင်သုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ဤတွင်ရှိသည့်အခါသဒ္ဒါရည်ညွှန်းစာအုပ်ကိုလည်းဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးပေါင် ၅၀ ယူဖို့သင့်ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်
သင်တစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအားလပ်ရက်လည်းမရှိသည့်အခါတစ်ပါတ်ဘို့စာရင်းသွင်း အကယ်. သင်တစ်ပတ်တစ်ဦးလျှော့စျေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ 2021 အတွက်အောက်ပါရက်မျှအတန်းရှိပါသည်:
၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းသည်ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်မှ စ၍ အတန်းများကိုပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
သောကြာနေ့2ဧပြီ - ကောင်းသောသောကြာနေ့
တနင်္လာနေ့5ဧပြီ - အီစတာတနင်္လာ
တနင်္လာနေ့မေ ၃ ရက် - မေနေ့
တနင်္လာနေ့ 31 မေလ - နွေဦးဘဏ်အားလပ်ရက်
တနင်္လာနေ့ 30 သြဂုတ်လ - နွေရာသီဘဏ်အားလပ်ရက်
သင်သည်သင်၏သင်တန်းကာလအတွင်းတစ်ဦးအားလပ်ရက်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်သိစေပါ။ သငျသညျတစ်ပါတ်တနင်္လာနေ့-သောကြာနေ့များအတွက်အားလပ်ရက်အပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကြောင်းတစ်ပတ်ကျူရှင်အခကြေးငွေကောက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျကွာသင့်ရဲ့ homestay ထံမှရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အခန်းတစ်ခန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။